Hesekiel 31 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
31 Na afe a ɛto so dubiako, ɔsram a ɛto so abiɛsa no da a edi kan no, Yehowa ka kyerɛɛ me sɛ: 2 “Onipa ba, ka kyerɛ Egypt hene Farao ne ne dɔm+ sɛ, “‘Hena na wosɛ no wɔ wo kɛseyɛ mu? 3 Hwɛ, wote sɛ Asiriani, Lebanon kyeneduru+ a ne dubaa fɛfɛ+ ne n’ahaban kusuu ma nwini, dua a ɛkorɔn+ a ne nkɔnmu du omununkum mu tɔnn.+ 4 Nsu ma ɛyɛɛ kɛse;+ subun ma enyin kɔɔ soro. Na ɛho nsuwansuwa twaa ne mfuw ho nyinaa hyiae, na eyiyii nsuka kɔɔ wuram nnua nyinaa ho. 5 Ɛno nti na enyin kokuroo kɔɔ soro sen wuram nnua a aka nyinaa no.+ “‘Na ne nnubaa bɛyɛɛ bebree na ne mmãã yɛɛ atenten, nsu pii a ɛwɔ n’akwan mu nti.+ 6 Ne nnubaa no so na wim nnomaa nyinaa bɛyɛɛ wɔn mmerebuw,+ na ne mmãã ase na wuram mmoa nyinaa woo wɔn mma,+ na ne nwini ase na aman akɛse nyinaa tenae. 7 Ɛbɛyɛɛ dupɔn+ fɛfɛ, na ne mmãã yɛɛ atenten kusuu, na eyiyii ntini faa nsu bebree so. 8 Kyeneduru biara nni Onyankopɔn turom a na ɛte sɛ ɛno.+ Ná ɔpopaw dua biara nni hɔ a ɛne ne nnubaa sɛ, na kyɛnkyɛn dua biara nni hɔ a na ɛte sɛ ne mmãã. Dua biara nni Onyankopɔn turom a na ɛyɛ fɛ te sɛ ɛno.+ 9 Ne mmãã yɛɛ kusuu, na memaa ne ho yɛɛ fɛ,+ na Eden nnua a ɛwɔ nokware Nyankopɔn turom nyinaa ani beree no.’+ 10 “Enti nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Esiane sɛ ɔbɛyɛɛ tenten* kokuroo maa ne nkɔnmu duu omununkum mu+ na ne tenten maa ne koma homan nti,+ 11 mede no bɛhyɛ amanaman tumfoɔ no nsa.+ Na ɔne no bedi no nwenweenwene. N’amumɔyɛ nti mɛpam no.+ 12 Na ahɔho, atirimɔdenfo a wɔhyɛ aman so, betwa ato fam, na nnipa begyaw no mmepɔw so; ne nnubaa bɛpempan agu subon nyinaa mu na ne mmãã abubu agu asase so nsubɔnten nyinaa mu.+ Asase so aman nyinaa befi ne nwini ase agyaw no hɔ.+ 13 Wim nnomaa nyinaa bɛba abesisi ne dutan a ɛda fam no so, na wuram mmoa nyinaa bɛba ne mmãã so.+ 14 Afei nsu ho dua biara renyɛ tenten kokuroo bio, na ne nkɔnmu rennu omununkum mu bio, na nea ɛnom nsu biara remma ne ho so ntia wɔn bio, efisɛ wɔde wɔn nyinaa bɛma owu+ na wɔakɔ asase ase tɔnn,+ wɔ adesamma mu, wɔn a wɔrekɔ amoa mu no nkyɛn.’ 15 “Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Da a ɛbɛkɔ Adamoa* mu no, mɛma awerɛhow aba.+ Na ne nti mɛkata subun no so, na mɛtwe ne nsuwansuwa no asan na masiw nsu bebree ano. Ne nti mɛma Lebanon adan sum kabii na wuram nnua nyinaa abotow. 16 Sɛ mede no ka wɔn a wɔrekɔ amoa mu ho kɔ Adamoa mu tɔnn+ na aman te n’asehwe no a, mɛma wɔawosow, na Eden nnua nyinaa,+ Lebanon nnepa a ɛyɛ fɛ nyinaa, nea ɛnom nsu nyinaa bɛkyekye wɔn werɛ+ wɔ asase ase. 17 Wɔne no kɔ Adamoa mu,+ na wɔakɔka wɔn a wɔde nkrante akunkum wɔn no ho, ne n’asefo a wɔte ne nwini ase wɔ amanaman mu+ no ho.’ 18 “‘Eden dua+ bɛn na wosɛ no wɔ anuonyam+ ne kɛseyɛ mu? Nanso wɔde wo bɛka Eden nnua ho akɔ asase ase tɔnn.+ Na wo ne momonotofo bɛda faako, wɔn a wɔde nkrante akunkum wɔn nkyɛn. Farao ne ne dɔm nyinaa ni,’ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni.”
^ Nea ɛkyerɛ ankasa ne “wobɛyɛɛ tenten.”